I-Raw Dolastatin 10 (110417-88-4) HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Dolastatin 10 (110417-88-4)
SKU: 110417-88-4. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Dolastatin 10 (i-CAS 110417-88-4), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ividiyo ye-Dolastatin 10
I.Dolastatin 10 Abalinganiswa basisiseko:
igama: Dolastatin 10
I-molecular Formula: C42H68N6O6S
Isisindo somzimba: 785.09g / mol
Isitoreji sokugcina: Gcina kwindawo epholile kunye eyomileyo kunye ne-0 - 4 ℃ kwithuba elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -57 ℃ ixesha elide (inyanga ukuya kwiminyaka)
umbala: I-White ukuya kwi-sollid emhlophe
II. I-Dolastatin 10 (110417-88-4) ekusebenziseni umjikelezo we-antitumor cycle
Ukusetyenziswa kwe2.Dolastatin 10:
Injongo: Usosayensi wezonyango uphando ngempumelelo kunye nobunobunzima be-anti-microtubule i-dolastatin-i-10 kwizigulane ezinomdlavuza ophezulu.
Izindlela: Izigulane ezingama-twenty-one ezineesifo somhlaza wesifo se-metastatic se-metastatic ziphathwa nge-dolastatin-10 kwiqondo le-400 mcg / m2 nge-intravenous bolus emva kweeveki ze-3.
Iziphumo: Omnye wezigulane ze-21 (5%; 95% CI: 0-24%) iphumelele ukuxolelwa ngokukodwa kwithuba leentsuku ze-113. Izigulane ezine zigcinwe izifo ezizinzileyo kwiintsuku ze-87. Izigulane zanikwa i-median ye-dolastatin-10. Ukutywala kwe-Hematologic kwakungqinelana, kunye nezigulane ze-8 zikhula nge-4 neutropenia, kunye ne-5 kunye ne-grade 3 neutropenia; elinye ibanga le-3 febrile neutropenia labonwa. Ezi ziqendu zeBakala 3 kunye ne-4 neutropenia zafumana ama-36% kwimijikelezo yonyango. Ubunzima be-hematologicalic toxicity ayiqhelekanga.
Isiphetho: Nangona iphrofayili yobunyoyiko be-dolastatin-10 yamkelekile, yayinomsebenzi omncinane kule sifundo somhlaza wesifuba.
In Vitro: i-Dolastatin 10 yipenteapeptide ekhethekileyo eyahlukana nolwandle eDolabella auricularia. Kufumanisa ukuba ezi nkcukacha ze-vitro zifana nezo ze-Dolastatin 10 kunye ne-Auristatin PE, nganye leyo inexabiso le-GI50 ye-10-5-10-6 μg / mL (10-2-10-3 nM) ngokufanayo i-minipanel yamacandelo eseli yoluntu. I-anti-drug conjugate (ADC) iqulethe anti-CD30 antioclonal antibody cAC10 ixiliswe kwi-agent ye-cytotoxic i-monomethyl auristatin E (i-MMAE), isalogue yokwenziwa kwe-tubulin polymerization inhibitor i-Dolastatin 10 (110417-88-4).
3.Xelela kwi-Dolastatin 10
Le mveliso yenzelwe uphando kuphela, kungekhona ukusetyenziswa kwabantu okanye ukusetyenziswa kwezilwanyana.
I-Dolastatin 10 yokuqala
I-total synthesis ye-Dolastatin 10 (110417-88-4) yagqitywa ngokuphuhlisa ukuhlanganiswa kakuhle kwezinto ezimbini eziphambili ze-amino acid, i-Dil (i-6) ne-Dap (i-11), kunye nokulandelana ngokulandelelana kwezinto ezinhlanu ze-amino acid ukusuka kwi-C-terminal Doe .
I-synthesis kunye noVavanyo lwe-Dolastatin 10 Analogues equlethe i-Heteroatoms kwi-Amino Acid Side Chains.
Iimpawu ezifanayo zendalo ezenza i-dolastatin i-10 zinomdla omkhulu kumdlavuza ngenxa yemisebenzi yabo enamandla ye-vitro kunye nokusetyenziswa kwabo njengemali yokuhlawula kwi-anti-drug conjugates (ADCs). Ukuguqulwa kwe-dolastatin I-scaffold yengundoqo ye-10 igxininise ukuguqulwa kwe-P1, N-terminus, kunye ne-P5, i-C-terminus, ngokuqwalasela okuncinci kwi-subXI ye-P2.
Kwisilingo yeselula, i-Dolastatin 10 (i-110417-88-4) ibonisa umsebenzi ngokuchasene ne-leukemia yesifo somntu, i-lymphoma kunye nemigca yesigxina ye-tumor (njenge-OVCAR-3 kunye ne-NSCLC) ngexabiso lee-IC50 ezivela kwi-0.1nM ukuya kwi-10nM. Okwangoku ivavanywa kwizilingo zeklinikhi.
III. I-Dolastatin 10 (110417-88-4) i-HCML
IV. Indlela yokuthenga i-Dolastatin 10 kwi-AASraw?